2018 China roba ígwè development - China Qingdao Otu ebe Machinery
Ebe ọ bụ na bottoming na 2016, China si roba ígwè ụlọ ọrụ nọgidere na-amụtakwu na 2017, na abụọ-ọbula ibu ke ahịa revenue, a ọkpụrụkpụ abawanye na mbupụ enwetakwa, na a ịrịba ama mmụba na ụlọọrụ profitability. Dị ka ụlọ ọrụ insiders, na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ taya ụlọ ọrụ na-ifịk ifịk etinye, na ina roba ígwè, karịsịa elu-nkenke nwere ọgụgụ isi roba ígwè, na-emeziwanye. Ọ na-atụ anya na China si roba ígwè ụlọ ọrụ ga-eze tinye elu ọwa 2018.
Rubber ígwè ụlọ ọrụ 'ahịa revenue mụbara budata
Dị ka ọnụ ọgụgụ nke roba ígwè ọkachamara òtù China Chemical Equipment Association, na 2017, 24 isi roba ígwè ụlọ ọrụ gafee mba enweta sales revenue nke 7,735 ijeri yuan, onye na-abawanye nke 11,3%. Site ntụnyere, ngụkọta sales revenue of China si roba ígwè ụlọ ọrụ na 2017 na-atụ anya iru 10,65 ijeri yuan, onye na-abawanye nke 10,9%. Nke a bụ afọ mbụ-on-afọ-abawanye na ụlọ ọrụ ahịa revenue kemgbe 2015.
Na 2017, n'ozuzu ọrụ ọnụego nke China si roba ígwè ụlọ ọrụ bụ dịtụ elu, na ahịa revenue nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ụba. N'etiti 24 ụlọ ọrụ e nyochara, e nwere 15 ahịa revenue ibu, 8 ọwọrọde, na n'elu 10 sales ụtụ ndị 6,54 ijeri yuan, aza ajụjụ maka 61,4% nke ngụkọta sales revenue, na ụlọ ọrụ ịta mụbara site 0,7%. Esiwanye ike.
Budata enwekwukwa profitability
Ọ bụghị nanị na ahịa revenue enweta ọkpụrụkpụ ibu, ma uru nke China si roba ígwè ụlọ ọrụ nwekwara ụba budata na 2017 tụnyere afọ gara aga, na ndị ụlọ ọrụ ahụ profitability amụbawo budata.
Ọ na-ghọtara na 24 roba ígwè ụlọ ọrụ na-niile na-eme ka mma uru, na uru ibu ụlọ ọrụ na akaụntụ maka na ọtụtụ. Karịsịa, profitability nke depụtara roba ígwè ụlọ ọrụ mma budata. Ihe atụ, na 2017, ụlọ ọrụ na-enweta a uru nke fọrọ nke nta 93 nde yuan, mgbe ke 2016, ọ bụ a na ọnwụ nke 770 nde yuan.
Dị ka ụlọ ọrụ na-eme nnyocha, ndị na-akwọ ụgbọala odudu n'ihi uru ibu bụ tumadi na-abawanye na iwu na mma nke ngwaahịa oké oke. Otú ọ dị, ọ bụ uru na-arịba ama na price nke ngwaọrụ bilitere sharply, nke belatara uru n'akụkụ peeji.
Exports nke mba ọzọ mgbanwe mụbara budata
Dị ka ọnụ ọgụgụ, na 2017, mbupụ nnyefe uru nke 24 roba ígwè ụlọ ọrụ na China bụ 1,836 ijeri yuan, elu 32,3% afọ-on-afọ. Site ntụnyere, ọ na-eme atụmatụ na ngụkọta mbupụ uru nke China si roba ígwè ụlọ ọrụ ga-eru US $ 360 nde ke 2017, a afọ-on-afọ-abawanye nke 20%.
Dị ka ụlọ ọrụ na-eme nnyocha, uto nke mba ọzọ mgbanwe enwetakwa site mbupụ bụ tumadi n'ihi na eziokwu na China na taya na ụlọ ọrụ nwere zara ndị US "abụọ mmegide" ma guzosie ike taya ụlọ mmepụta ihe na United States na Southeast Asia. Ina roba ígwè kpụrụ a obere njedebe. Ugbu a, ịnụ ọkụ n'obi nke China na taya ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ mmepụta ihe na esenidụt na-aga n'ihu ferment. Dị ka mbido ọnụ ọgụgụ, ihe karịrị 10 taya oru na-amalite ma ọ bụ na-eme atụmatụ na-amalite. Ke adianade do, mba taya ahịa ego bụ anụ, na e nwere ndị ọzọ taya ego oru na Continental na Bridgestone, nke nwekwara-atọ ntọala maka mbupụ nke roba ígwè na China. The ụlọ ọrụ na-atụ anya na China si roba ígwè ebupụ ga-adịrị mma na 2018, na ogo internationalization ga-n'ihu mma.
Post oge: Aug-24-2018